Oscar-Inokunda Director Mark Boal kuna Direct Thriller Series Echo 3 yeApple TV + | Ndinobva mac
Oscar-anokunda director Mark Boal kunongedza inonakidza Echo 3 yeApple TV +
Maka Boal naKathryn Bigelow
Apple inoenderera nekuwedzera zvibvumirano zvekuunza zvimwe uye zvitsva zvemukati kune ayo ekutsikisa vhidhiyo masevhisi. Nhau dzichangoburwa dzakanangana nezvirongwa zveApple mupfungwa iyoyo, hazvibvi kune chero svikiro, asi kubva kuna Apple chairo, uyo kubudikidza nepepanhau. yazivisa chibvumirano chayasvika nemutungamiri Mark Boal.
Mark Boal, Oscar anokunda muvhi yemuvhi Locker rinorwadza (The Hurt Locker) muna2008 yakatungamirwa naKathryn Bigelow uye akasarudzirawo mubairo weChikamiro che Husiku hwakasviba (Zero Rima Makumi Matatu), zvakare rinotungamirwa naKatheryn Bigelow, ndiye anotarisira nyora uye gadzira iyo Echo 3 akateedzana, yekufungidzira akateedzana.
Iyi nhepfenyuro nyowani ichagadzirwa neApple uye neKeshet Studios, ichaiswa muSouth America, Ichave ine zvitsauko gumi uye ndiyo ichangoburwa chirongwa mune irikure runyorwa rwe premium yepasirese nhepfenyuro inongowanikwa chete paApple TV +
Mu "Echo 3," Amber Chesborough, akangwara musayendisiti wechidiki, inzvimbo yepamoyo yemhuri diki yekuAmerica. Paanonyangarika pamuganhu pakati peColombia neVenezuela, munin'ina wake nemurume wake, varume vaviri vane ruzivo rwakadzama rwechiuto uye zvakapfuura zvakaoma, vanotambura kuti vamuwane mumutambo wega, vachipesana nehure hwehondo yekuvanzika.
Iyi nhevedzano yakavakirwa pane akateedzana Kana magamba achibhururuka (Kana Magamba Achibhururuka), yakagadzirwa naKeshet Broadcasting, yakagadzirwa naOmri Givon uye yakafuridzirwa nebhuku raAmir Gutfreud rine zita rimwe chete. Kuva yakaiswa pakati peColombia neVenezuela, akateedzana anozopfurwa pamwe nehurukuro muChirungu neSpanish.
Ichi ndicho chibvumirano chechipiri chekubatana pakati peApple neKeshet International, mushure Kushungurudza, mutambo mutsva kubva kuKeshet Productions nyeredzi Uma Thurman uye zvichibva pane yakapihwa mubairo-inoteedzana yeIsrael naAmit Cohen naMaria Feldman Flase Mureza.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Ndinobva mac » apuro » Noticias » Oscar-anokunda director Mark Boal kunongedza inonakidza Echo 3 yeApple TV +
Apple inovhura iyo inoshamisa Sanlitun Chitoro muBeijing
macOS Catalina 10.15.6 inogadzirisa dambudziko rekubatana kweiyo USB chiteshi cheMacBook Pro uye MacBook Air 2020